Uphawu lwenkezo ye Chibuku Cup
Imidlalo yenguqu yesigaba se Castle Lager Premier Soccer League, ihlaba ikhefu kulimpelaviki idedela imidlalo yomncintiswano owenkezo ye Chibuku Super Cup.
NgoMgqibelo iqembu le CAPS United lizangqikilana lele Harare City enkundleni ye National Sports Stadium.
Lumdlalo uza kungensuku ngaki lawa maqembu edibane kusigaba seligi lapho iqembu le CAPS United elinqobe khona nge 1 ka nya emdlalweni obukhangelelwe ngabanengi njengoba umqeqetshi weqembu le Harare City uLloyd Chitembwe ubedibana okwakuqala leqembu le CAPS United ngemva kokwehlukana lalo ngenyanga kaNcwabakazi.
NgeSonto kulomdlalo oxega amaqembu amabili amakhulu elizweni iqembu le Dynamos kanye lele Highlanders enkundleni ye National Sports Stadium.
Womabili lawa maqembu awadlalanga kuhle kumncintiswano weligi lonyaka njalo ele Highlanders njengalo belibalelwa kuluhlu lwamaqembu asengozini eyokugunyulwa kusigaba saphezulu phambilini kokunqoba kwalo ele Bulawayo Chiefs ngoLwesithathu laselikhuphuka kancane engalaneni layahlala endaweni yetshumi lanye.
Yileso sizatho ke esenza obephethe isikhundla sikamqeqetshi waleliqembu uMandla Mpofu ukuthi athi leliqembu kalifuni ukuxotsha impala ezimbili.
“Ukudlala leqembu le Dynamos kuvele akukho lula kungakhathalekike ukuba ngumdlalo owokuzwana amandla kumbe oweligi loba owenkezo ethile.
Yebo kambe singakuthakazelela ukuphakamisa inkezo ye Chibuku kodwa okusemqoka ngalesi isikhathi yikuba sithole imiklomelo siphakame engalaneni yemiklomelo.
Sizadlala silenjongo eyokunqoba emdlalweni wethu leqembu le Dynamos kodwa njengoba ngitshilo thina esikukhangelele kakhulu yikuthola imiklomelo kumidlalo yeligi,” kutsho uMpofu.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngeSonto iqembu le Black Rhinos lizadlala lele Tel One ngase National Sports Stadium kuthi ele Chicken Inn lizemukela ele Manica Diamonds ngase Luveve.
Kulemidlalo emibili edluliselwe phambili ngoba kulamaqembu akuleli aphatheke kumncintiswano owokudinga intshantshu zezwekazi lase Africa.
Limidlalo ngegoqela obekumele ubephakathi kweqembu le FC Platinum kanye lele Chapungu wona odluliselwe phambili ngoba iqembu le FC Platinum liselizweni lase Mozambique lapho eliyedlala khona leqembu le UD Songo emdlalweni wehlandla lesibili elesigaba sakuqala esomncintiswano we CAF Champions League.
Omunye njalo odluliselwe phambili ngokade kumele ube phakathi kweqembu le Triangle lele Herentals njengoba iqembu le Triangle lizadibana lele Azam elakwele Tanzania kumncintiswano we CAF Confederation Cup kusasa ngoMgqibelo.